50 Zvanzi naJehovha: “Riripi zvino, gwaro rokuramba+ amai venyu vandakadzinga?+ Kana kuti ndakakutengesai kuna ani pane vandiine chikwereti navo?+ Tarirai! Makatengeswa nokuda kwokukanganisa kwenyu,+ uye amai venyu vakadzingwa nokuda kwokudarika kwenyu.+ 2 Nei, kwakanga kusina munhu pandakapinda?+ Kwakanga kusina munhu aipindura pandakashevedza?+ Chokwadi ruoko rwangu rwapfupika zvokuti harugoni kudzikinura,+ kana kuti handina simba rokununura here? Tarirai! Ndinoomesa gungwa+ nokutuka+ kwangu; nzizi ndinodziita renje.+ Hove dzadzo dzinonhuhwa nokuda kwokushaya mvura, uye dzinofa nenyota.+ 3 Matenga ndinoapfekedza rima,+ uye ndinoita kuti masaga ave chokuafukidzisa.”+ 4 Changamire Ishe Jehovha akandipa rurimi rwevakadzidziswa,+ kuti ndigone kupindura munhu akaneta neshoko.+ Iye anondimutsa mangwanani oga oga; anomutsa nzeve yangu kuti inzwe sezvinoita vakadzidziswa.+ 5 Changamire Ishe Jehovha akavhura nzeve yangu, uye ini ndakanga ndisingapandukiri.+ Handina kufuratira.+ 6 Ndakapa varovi musana wangu, uye ndakapa vaya vanodzura bvudzi matama+ angu. Handina kuvanzira chiso changu zvinhu zvinonyadzisa uye kupfirwa mate.+ 7 Asi Changamire Ishe Jehovha achandibatsira.+ Ndokusaka ndisingazonyadziswi. Ndokusaka ndaita kuti chiso changu chive dombo rakaoma kwazvo, uye ndinoziva kuti handizonyadziswi.+ 8 Iye ari kunditi ndakarurama ari pedyo.+ Ndiani angakakavadzana neni? Ngatisimukei pamwe chete.+ Ndiani anopikisana neni pakutongwa?+ Ngaaswedere pedyo neni.+ 9 Tarirai! Changamire Ishe Jehovha achandibatsira. Ndiani aripo anganditi ndakaipa?+ Tarirai! Vose zvavo, vachasakara senguo.+ Chitemamachirawo zvacho chichavadya.+ 10 Ndiani pakati penyu anotya+ Jehovha, anoteerera inzwi romushumiri wake,+ akafamba murima+ rinogara riripo uye asina chiedza? Ngaavimbe nezita raJehovha+ asendamire pana Mwari wake.+ 11 “Tarirai! Imi mose muri kubatidza moto, muri kuita kuti pfarivari dzivheneke, fambai muchiedza chomoto wenyu, uye pakati pepfarivari dzamabatidza. Muchawana izvi kubva paruoko rwangu: Mucharara pasi muchirwadziwa kwazvo.+